February 2018 – Thutastar
“One Championship ရူံးပွဲမရှိ MMAဖိုက်တာ” ပညာသားပါပါ ကစားတက်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ကောင်း…..
Comments Off on “One Championship ရူံးပွဲမရှိ MMAဖိုက်တာ” ပညာသားပါပါ ကစားတက်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ကောင်း…..
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဖိုက်တာတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖိုးသော်ကို တော့ပရိသတ်များ သိမယ်ထင်ပါတယ်။ လက်သီးချက်ပြင်းပြီး ပွဲပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပီပီပြင်ပြင်ချနိုင်ခဲ့လို့ လက်ရှိ MMA မှာနေရာတစ်ခုကို ရရှိနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မကြာမီယှဉ်ပြိုင်မည့် ပွဲတွေအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖိုးသော်ကတော့ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကို စတင်ကစားခဲ့ပြီး MMA ပွဲကိုပြောင်းလဲကစားခဲ့ကြောင်း လဲသိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၃)က ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ One Championship ခါးပတ်လုပွဲမှာ ဖိုးသော်ကတော့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား ဆိုဆေးနှင့် ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ပထမအချီ မှာပဲ အလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါပွဲတွင် ဖိုးသော်ကတော့ ရွှေခါးပတ်နှစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်းနှင့်အတူ မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ One Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့ MMA ဖိုက်တာ ဖိုးသော်ကတော့ ရူံးပွဲမရှိ စံချိန်ကို တင်ထားနိုင်သူတစ်ယောက်လည်း
၁၀ နှစ်အရွယ် စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူတစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်မှု ၃ ရက်အတွင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
Comments Off on ၁၀ နှစ်အရွယ် စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူတစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်မှု ၃ ရက်အတွင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
၁၀ နှစ်အရွယ် စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူတစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်မှု ၃ ရက်အတွင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး ==================== မိုးကောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ထောက်ကလေးကျေးရွာ ပရဟိတကွင်း(ဒေသအခေါ် နောင်တာလ ကွင်းအမှတ် ၇၃)တွင် ဖေဖော်ဝါရီ၂၅ရက် နံနက်ပိုင်းက အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူ မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအား အဓ္ဓမပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူနှစ်ဦးအား ၃ရက်အတွင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ၂၅ရက် နံနက်ပိုင်းက မိုးကောင်းမြို့နယ် ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ထောက်ကလေးကျေးရွာ ပရဟိတကွင်း(ဒေသအခေါ် နောင်တာလ ကွင်းအမှတ် ၇၃)တွင် ညောင်ထောက်ကလေးကျေးရွာနေ အောင်မင်္ဂလာအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမှ စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူ မမွှေးမွှေး(၁၀)နှစ်(ဘ)ဦးမောင်အိုက်သည် ထင်းခွေသွားရာမှ ပြန်ရောက်မလာသဖြင့် ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှလိုက်လံရှာဖွေရာ ဓားဒါဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ မိုးကောင်းမြို့မရဲစခန်းသို့
အတ္တကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့သော ပန်းလေးတစ်ပွင့် …!
Comments Off on အတ္တကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့သော ပန်းလေးတစ်ပွင့် …!
” ဆရာမ သမီး မခိုးပါဘူး ” ” သမီး မခိုးရင် ဒီစာအုပ်က ဘယ်လိုလုပ် သမီး လွယ်အိတ်ထဲ ရောက်နေတာလဲ ” ” ဒါတော့သမီးလည်း မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကို တစ်ကယ် မခိုးခဲ့ပါဘူးရှင့် ။ ဘုရားပေးပေး ကျမ်းပေးပေးပါ ဆရာမရယ် သမီး မခိုးခဲ့ပါဘူး..ဟီး … ဟီး ,.. ဟီး ” “ခုမှ ငိုပြ မနေနဲ့တော့။ အခုက လက်ပူးလက်ကြပ် သက်သေနဲ့တစ်ကွ မိတာ။ ရှင်းပြချက်ပေးချင်ရင် မနက်ဖြန် သမီးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူခေါ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးပြောပေါ့ ။ ခုတော့ ဆရာမ စာသင်တော့မယ် ။ စာအုပ်ပိုင်ရှင်လည်း ပျောက်တဲ့ စာအုပ်ပြန်တွေ့ပြီဆိုတော့ ကျေနပ်လိုက်တော့ ။
တိမ်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတစ်ဦး လေယာဉ်ပေါ်ကနေ အမှတ်မထင်တွေ့ 
Comments Off on တိမ်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတစ်ဦး လေယာဉ်ပေါ်ကနေ အမှတ်မထင်တွေ့ 
ကျွန်တော့ လဲ ဝိုင်းမဝုန်းနဲ့နော် ကျွန်တော် ကသတင်း ရသလောက်တင်ပေးနေတာပါ။ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်က Website link ထဲမှာ ဝင်ဖတ်နိုင်ပါတယ် ပြောထားတာက ခရီးသည်တင် လေယာဉ် တစ်စီး ဟာ United Kingdom အပေါ်ယံ တိမ်လွာ ထက်၌ ဖြတ်သန်း ပျံသန်း နေစဉ်တိမ်လွာ ပေါ်တွင် လူတစ်ဦး လမ်းလျေက်နေတာ တွေ့ရှိရပါ သတဲ့။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ Warner Brother`ကာတွန်းကားထဲက ဘီလူးလိုလို သို့မဟုတ် Michelin man ဆိုတဲ့ တိုင်ယာ ကြေငြာထဲ က တိုင်ယာ ပါတ်ထားတဲ့ လူပုံ လိုလို ပုံစံမျိုးကြီးပါတဲ့။ နောက်ပြီး အရိပ် လည်းပါ ပါတယ်။ ခန့်မှန်းသူတွေက ဒါဟာ မြေပြင်က အပူ လှိုင်း
“လက်မှတ်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ” လက်ထပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်လေးထဲမှာ လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေကြတယ်…
Comments Off on “လက်မှတ်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ” လက်ထပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်လေးထဲမှာ လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေကြတယ်…
“လက်မှတ်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ” လက်ထပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်လေးထဲမှာ လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေကြတယ်… “လက်မှတ်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ” လက်ထပ်ပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ အသစ်စက်စက်လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေ လက်ဖွဲ့တဲ့ တစ်ထပ်တိုက်လေးထဲမှာ လက်ဖွဲ့တွေကို စစ်ဆေးကြည့်နေကြတယ်။ နှစ်ဖက်မိဘတွေဟာ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူဌေးတွေ ဖြစ်ကြလို့ လက်ဖွဲ့တွေကလည်း အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ များပါတယ်။ နောက်ဆုံးလက်ဖွဲ့အထုတ်ကို ဖေါက်လိုက်တယ်။ အထုတ်ထဲမှာ စာအိတ်ဖြူတစ်ခုကို တွေ့ရတယ်။ စာအိတ်ကို ဖေါက်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်အပတ်မှာ လုပ်မယ့် နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ရဲ့ Live Show ပွဲတစ်ခုရဲ့ ရှေ့ဆုံးတန်းက လက်မှတ်နှစ်စောင် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ Show ပွဲရဲ့ လက်မှတ်ခဟာ အရမ်းဈေးကြီးသလို လက်မှတ်ဝယ်လို့လည်း မရတော့ဘူး။ ဖျော်ဖြေမယ့် အဆိုတော်ဟာ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး
Comments Off on သက်တော်စောင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက် ၁၁ ချက်
သက်တော်စောင့် ? ကုမ္ပဏီဥက္ကဠတွေ၊အနုပညာရှင်တွေ၊ကမ္ဘာကျော်သူဠေးကြီးတွေအနားမှာ အမြဲတမ်းလိုလိုမြင်တွေ့ရတတ်တဲ့ကိုယ်ရံတော်သက်တော်စောင့်တွေကုိုသတိထားမိကြမှာပါ။သက်တော်စောင့်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကိုထိခိုက်စေမယ့်သူတွေရန်ကနေကာကွယ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကတော့… ၁။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတာက အမြဲတမ်းမကောင်းပါဘူး လူအုပ်ကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါ၊ကြောက်လန့်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမျိုးမှာ လူကောင်ကြီးမားတဲ့သက်တော်စောင့်တွေက အသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်ဝှေ့သမားလိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးနဲ့သက်တော်စောင့်မျိုးက တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကတော့ ငှားရမ်းသူအပေါ်မူတည်တယ်လို့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က Guardian Professional Security အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင် Anton Kalaydjian ကပြောပြပါတယ်။ သက်တော်စောင့်ငှားတာကလည်း ကားရွေးသလိုပါပဲ။တစ်ခါတစ်လေ ငှားရမ်းသူတွေက SUV ကားလိုအကြီးကြီးတွေလိုချင်တယ်။တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း သာမန်အရွယ်အစားလောက်ပဲလိုချင်ကြပါတယ်။ပုံမှန်ကြည့်ကောင်းရုံခန္ဓာကိုယ်မျိုးနဲ့ဘော်ဒီဂတ်အမျိုးသားတစ်ယောက်လို သက်တော်စောင့်မျိုးလည်းလိုချင်ကြပါတယ်။ ၂။သေနတ်နဲ့လက်သီးကလည်းအသုံးမ၀င်သလောက်ပါပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးသက်တော်စောင့်ရဲ့အလုပ်ကလည်းပြောင်းလဲတာပါပဲ။ဖျော်ဖြေရေးပွဲက အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုကာကွယ်ရတာနဲ့ ဆေးဝါးဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီစီးအီးအိုတစ်ယောက်ကို ကာကွယ်ရတာက မတူညီပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ စီအီးအို၊ဥက္ကဠဖြစ်တဲ့ Kent Moyer က သက်တော်စောင့်ဆိုတာ တိုက်ခိုက်ရတာ၊သေနတ်နဲ့ပစ်ရတာ စတဲ့အလုပ်စီးပွားရေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတွေကနားမလည်ကြပါဘူး။ သူတို့က သက်တော်စောင့်တွေကိုအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်အောင်၊ဘေးကင်းရာအရပ်ကိုရွေ့ပြောင်းနိုင်အောင်၊အန္တရာယ်ဖြစ်မယ့်နေရာကနေရှောင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားတာပါ။ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အားသုံးရတာမျိုမဟုတ်ပါဘူး။သက်တော်စောင့်တစ်ယောက်က သေနတ်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကရန်သူဘက်ကသေနတ်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါမျိုးမှာသာဖြစ်တယ်လို့
Comments Off on ရက်စက်လိုက်တာရွှေအင်းတော်……
ရက်စက်လိုက်တာရွှေအင်းတော်…… တနှစ်မှတခါ ကြုံလာသည့်ပွဲပေမို့ နွဲပျော်ချင်ခဲ့လေသမျှ ရွှေအင်းတော်ရေ ရက်စက်လှချီလား ဘယ်အငြိုးရယ်ကြောင့် ရွှေမိုးတွေစွေခဲ့ပါလိမ့် နွေခေါင်ခေါင်ရှုမြင်ကွင်းတွေက ရွှေမိုးညိုအုံ့ကာမှိုင်းလို့ရယ် မည်းမည်းလို့မှောင်••• လေပြင်းရယ်အလာ ရွှေအင်းမှာ စက်လှေစီးရှာတဲ့ ရှစ်တန်းအရွယ် ကလေးငယ်တသိုက်ကိုမှ ရိုက်ခတ်ခဲ့ လှိုင်းဒါဏ် မနက်ဖန်စာမေးပွဲမဖြေဖြစ်ရအောင် တမင်တကာ ကြံဆောင်ခဲ့လေသလား••• နောင်ဘဝဆီက ဘုရားမကြိုက်အောင်လုပ်ခဲ့မိတဲ့ တရားမလိုက်တဲ့အမိုက်ပေမို့လား သို့တည်းမဟုတ် ကလေးအမိုက်မဲလေးတွေမို့ နတ်မကြိုက်တာများပြုမိလေသလား ရွှေအင်းတော်ရေ အခုများမှာဖြင့် မျက်ရည်မိုးတွေ ရွာခဲ့ပေါ့ကွယ်••• နောင်နှစ်တွေမှာ သည်အဖြစ်တွေမကြုံပါရစေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ နှုတ်ယူလိုက်တဲ့ သည်အသက်ဖြင့်သာ ကျေပါလော့ ဘဝအဆက်ဆက်ကြုံလေသမျှမှာ (ကလေးတွေရေ) ဒီအဖြစ်ဆိုးနဲ့ဝေးပါစေကွယ် ဆန်းသူရိန်(ခရမ်းကျွန်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အင်းတော်ကြီးဘုရားပွဲ၌ စက်လှေတိမ်းမှောက်ရာတွင် အသက်သေဆုံးခဲ့သောကလေးငယ်များ ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ပါစေ။ photo;credit ======================== Aung Moe Myint
သံဃာတော်တွေကို ပြစ်မှားလို့ လက်ရှိဘ၀မှာပင် ခံစားရတဲ့အကုသိုလ်
Comments Off on သံဃာတော်တွေကို ပြစ်မှားလို့ လက်ရှိဘ၀မှာပင် ခံစားရတဲ့အကုသိုလ်
သံဃာတော်တွေကို ပြစ်မှားလို့ လက်ရှိဘ၀မှာပင် ခံစားရတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပါ။ ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ ✿▬❧▬✿▬❧▬✿▬❧▬✿▬❧▬✿ မြတ်ဗုဒ္ဓသည်သည်လည်း အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်က မစင်ကြယ်သော်လည်း အလှူပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘက်က စင်ကြယ် လျှင် အကျိုးကြီးသည်ဟု ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤသို့မဟုတ်ဘဲ မိမိမြင်ဖူးကြားဖူး တွေ့ဖူးသည့် ရဟန်းတစ်ချို့ကို ကြည့်၍ ရဟန်းအားလုံးအတူတူပဲဟု သတ်မှတ်ပြီး ပြစ်မှားမိပါက ရန်မီးလောင်ခံရသည့် အကြောင်းကို အောက်ပါဖြစ်ရပ် မှန်ဇာတ်လမ်းအားထပ်မံ၍ တင်ပြပါဦးမည်။ “ နှုတ်မစောင့်သော မိန်းမချော” ********************************* ရုံးဆင်းချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် လိုင်းကားပေါ်တွင် ခရီးသည်များ ပြည့်ကျပ်နေသည်။ ကားပေါ်တွင် သက်တော်သုံး ဆယ်ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိသေးသည့် ရဟန်းတစ်ပါးလည်းလိုက်ပါလာသည်။ ကားအရှေ့ပိုင်းရှိ “သံဃာတော်များကို ဦးစားပေးပါ”ထိုင်ခုံတွင်လည်း ဦးထားသည့်သူကရှိနေသည်။ ထို့အပြင်ထိုနေရာသို့ရောက်အောင်သွားဖို့က ပြည့်ကျပ်နေသည့်လူတွေထဲ တိုးဝှေ့၍သွားရမည် ဖြစ်သည့် အတွက် မလွယ်ကူလှပေ။ ပြီးတော့မကြာမီ ဆင်းရမည့်မှတ်တိုင်သို့ရောက်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် အလယ်လောက်မှာ ပင်
ပထမဆုံးကလေးလေးက သားယောက်ကျားလေးဖြစ်နေလို့ ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကိုမြင့်မြတ်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
Comments Off on ပထမဆုံးကလေးလေးက သားယောက်ကျားလေးဖြစ်နေလို့ ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကိုမြင့်မြတ်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားဂျင်းကောင်ကတော့ လက်ရှိအပျော်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကေညီရဲ့ ဒုတိယသားလေးမွေးပြီးကတည်းက ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်တစ်ယောက် လက်ရှိမှာတော့ စိတ်ကူးတွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူအတွက် ဂုဏ်ယူနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြင့်မြတ်၏ ချစ်ဇနီးလေးကတော့ သားယောကျာ်းလေးကို လွယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော် မြင့်မြတ်ကတော့ မကြာမီအဖေတူသားလေးတစ်ယောက်ကို ရရှိတော့မှာလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ လက်ရှိဇနီးသည်ကို ပျော်ရွှင်မှုများစွာကို ဖန်တီးပေးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ မြင့်မြတ်တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် တရုတ်ပြည်မှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါပျော်ရွှင်မှုများကိုလည်း ” ကျွန်တော်အရမ်းမျှော်လင့်နေတဲ့ သားဦးရတနာလေးကို လွယ်ထားတဲ့ ချစ်ဇနီးနဲ့အတူ အတိုင်းထက်အလွန် ပျော်နေမိပါတယ် ” ဟူ၍ မြင့်မြတ်၏ လူမှုစာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သက်ငယ်မုဒိမ်းကာကွယ်တားဆီးရေးပညာပေး ကျေးရွာအထိ ပြုလုပ်မည်
Comments Off on သက်ငယ်မုဒိမ်းကာကွယ်တားဆီးရေးပညာပေး ကျေးရွာအထိ ပြုလုပ်မည်
သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကို မြန်မာပြည်အနှံ့ရှိကျေးရွာတွေအထိ အသိပညာပေး ဟောပြောသွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ အွန် လိုင်း ပရဟိတ ဖန်မလီက ကိုဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက် အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်တွေ မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံရတဲ့အမှုတွေဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ၆၇၁ မှု ဖြစ်ပွားပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ ၈၉၇ မှုဖြစ်ပွားကာ အမှုပေါင်း ၂၂၆ မှုတိုးလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ ဧရာဝတီတိုင်းက အမှုပေါင်း ၁၅၆ မှုနဲ့ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးက မန္တလေးတိုင်းမှာ ၁၀၈ မှုဖြစ်ကာ တတိယအများဆုံးကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၂ မှု ဖြစ်ပွားပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်းတွေက အရမ်းကိုများလာတယ်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထက်ကို ၂၀၁၇